Topnews:-Liiska Golaha Wasiiradda cusub -qabiiladooda iyo xilalka - iftineducation.com
Topnews:-Liiska Golaha Wasiiradda cusub -qabiiladooda iyo xilalka
iftineducation.com – Golaha Wasiiradda Cusub ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqo saacad kadib waxeeyna kala yihiin:-
1-Cabdi Kariim Xuseen Guled -Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Federalka ,Habargidir ,Hawiye,Wuxuu ka mid yahay sedexda qof ee ugu sareeysa Damujadiid,waana nin horey ugu fashilmay Wasaaradda Arrimaha gudaha iyo tan Amniga .
Cabdi Kariim Guuleed oo loo yaqaan Dhegajuun wuxuu Waardiye ka ahaan jiray Machad-kii Simad ee Faarax Cabduqadir iyo Xasan Garguurte,waana shaqsi aan moowqif laheyn balse aan marnaba qiyaamin Saaxiibadiisa Damujadiid.
Cabdi Kariim Dhegajuun wuxuu xilka Wasiirka Amniga iska casilay isagoo indhahiisa ilin ku taagan tahay laakiin dhamaan dadka la magacaabay marka la qiimeeyo waxeey ceebalahiisa noqonayaan kuwa aan laga nixin ,
2-Abdullahi Sanbaloolshe Wasiirka Amniga,Xawaadle Hawiye,,waa nin maskixiyan waalan oo Dowladda Ingiriiska dalkeeda ka erisay kadib markii Safiir loo magacaabay -wuxuu horey ugu fashilmay Hay’ada Nabadsugida.wuxuuna ka mid yahay shaqsiyaadka xabashida u basaasa dalkeena ama ka shaqeeya sideey u qabsan lahaayeen.
Sanbaloolshe maaha qof maskixiyan fiyoow,wuxuuna si xun u caayaa dadka ,isagoo iskaga hadaaqa wax walba oo afkiisa qabto laakiin waxaa xusid mudan inaan golaha Wasiiradda lagu soo derin Geesiga shaqo wanaaga loogu doowgalay ee Cabdullahi Goodax Barre.
3-Mohamed Mukhtaar Wasiirka Kaluumeeysiga iyo Kheyraadka badda, Gaaljecel Hawiye,wuxuu ka mid yahay Kaadiriinta Damujadiid.
4-Nadiifo Mohamed Osman Wasiirka Hoowlaha guud iyo dib u dhiska,Gugundhabe ,Hawiye,waxeey ka mid tahay Kaadiriinta Damujadiid.
5-Mustaf Dhuxulow Wasiirka Warfaafinta,Hiddaha iyo Dalxiiska Murusade,Hawiye.wuxuu kursiga ku helay ololahiisa Mucaaradka laakiin Damujadiid waxeey qorsheeynayaan iney xilka qaadis ku sameeyaan marka Xukumadda la ansixiyo kadib.
6-Faarax Cabduqadir Wasiirka Cadaaladda ,Reer Aw Xasan,Sheekhaal Hawiye,waa ninka ugu awooda badan Urur diimeedka Damujadiid,waana ninkii riday labadii Ra’isulwasaare ee Xukumadda soo qabtay,waxeey magacaabistiisa aad uga nixisay shacabka Soomaaliyeed maadama uu astaan u noqday qaran dumin iyo gumeeysi u shaqeeyn.
7-Xasan Maxamed Jimcaale,Wasiiru doowlaha Dastuurka,Duduble Hawiye,
8- Cabdiraxman Cabdi Cismaan Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha ,Ajuuraan,Hawiye,waxaa ninkaan lagu bedelay Boos uu ku qornaa Cabdi Axmed Baafo.ninkaan wuxuu mudo dalka Norway ugu xirnaa inuu ka tirsan argagixisada Al-Shabaab,wuxuuna ka mid yahay xagjiriinta mudada dheer ka dhex dagaalameysay Baarlamaanka Somalia,dadka qaar waxeey sheegaan inuu si hoose ula shaqeeyo Al-Shabaab halka dad kale rumeeysan yihiin inuu ku biiray Damujadiid.
Wasiir Cabdiraxman Cabdi wuxuu ku dhashay Qalaafe,wuxuu leeyahay neenaaso badan sida Cabdiraxman Gareen,Cabdiraxman Tunkulush,wuxuuna Xaaskiisa dejiyay dalka Masar.
Gareen waa jufo hoosaadka uu ka dhashay oo ah Boqortooyadda Beesha Ajuuraan.
Dadka qaar waxeey leeyihiin Cabdiraxman Tunkulush waa suurtagal inuu yahay dhabal ajansi oo xitaa Sirdoonka Norway la shaqeeyo maadama uu mudo dheer u xirnaa argagixiso inuu yahay.
1- Cabdalla Boss Wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta – Isaaq Habaryoonis
2-Abdirahman Beeyle Wasiirka Arrimaha dibadda iyo ,Gadabuursi ,Dir. ninkaani waxeey dad badan u yaqaaniin Wadani laakiin wuxuu noqday qofka ugu musuqmaasuqa badan Dowladda Somalia ,wuxuuna gurigii ugu dambeeyay ka dhisanayaan Xaafadda Jigjiga Yar ee Magaaladda Hargeysa.
3- Mohamed Cabdi Xayir Maareeye Wasiirka Korontada iyo Biyaha , Habarjeclo Isaaq.
4-Cabdullahi Sheekh Ismaaciil Wasiirka Gaadiidka Cirka iyo dhulka , Biyomaal,Dir,ninkaani wuxuu ka mid yahay shaqsiyaadka mudada dheer Amxaaradda u qaabilsanaa isku dirka iyo burburinta Qaranka Somalia,waana shaqsi qamriga habeen iyo maalin caba,oo saqraana afar iyo labaatanka saac.
5- Maxamed Cumar Carte Qaalib, Ra’isulwasaare ku xigeen,Habar Awal,sacad Muuse,Isaaq.ninkaan waxaa dhalay Ra’isulwasaarahii Somalia Cumar Carte Qaalib,wuxuuna la saaxiib yahay Ra’isulwasaare Cumar Xalweyste.
6-Ducaale Adan Cisman Wasiirka Sports-ka iyo dhalinyarada ,Dir,waxaa ninkaan daqiiqadahii ugu dambeeyay lagu bedelay Booska Cabduqadir Badaadi.
1-Daud Bisle,Wasiirka Macdanta iyo Batroolka,Dhulbahante ,Daarood,Waa Damujadiid horey uga tirsanaan jiray Wasiiradda Puntland.
2-Cabduqadir Gaabane -Wasiirka Dastuurka – Leelkase Daarood.wuxuu ninkaan rajo ka qabay in loo magacaabo Ra’isulwasaare,wuxuu heysta dhalashada Canada.
3-Xuseen Cabdi Xalane,Wasiirka Maaliyadda ,Ogaadeen,Daarood,waa nin ku xiran Amxaarada oo lagu tilmaamo shaqsiyaadka u bahdilan gumeeysiga Ethiopia.
4-Maxamud Cali Magan,Wasiirka Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga,Mareexaan,Daarood,waa reer Ugaas Sharmarke,waxeey isku dhaw yihiin Ra’isulwasaarahii hore,
5-Abdullahi Ahmed Jamac Ilka Jiir,Wasiirka Waxbarashada iyo Barbaarinta – Warsengeli Daarood.wuxuu horey u soo ahaay Wasiir ka tirsan Puntland,waxaana la gelshay Booskii Saciid Qoorsheel oo todobadii Xildhibaan ee beeshiisa lix ka mida diideen.
6- Saciid Xuseen Ciid,Wasiirka Caafimaadka,,Daarood,
6-Mohamud Xayir Ibrahim,Wasiiru dowlaha Madaxtooyadda, Majeerteen ,Daarood.
1-Mohamed Sheekh Xasan Xaamud ,Wasiirka Gaashaandhiga ,Raxanweyn
2-Yusuf Macalin Amiin Baadiyow,Wasiirka Dekaddaha ,Leesaan,Raxanweyn.
3-Hussein Mohamed Sheekh Badni,Wasiirka Beeraha ,Raxanweyn
4-Abukar Mardaadi,Wasiirka Xanaanada xoolaha,dhirta iyo daaqa, Garre Digil,waa Madaxweynahii Shabelle State,waxaana xilka loogu magacaabay inuu ka tanaasulo Madaxweynenimadiisa Shabelle .
5- Axmadeey Sheekh Mukhtaar -Wasiirka Diinta iyo Aawqaafta,Raxanweyn,waxaa dhalay Gudoomiyahii Baarlamaanka Somalia,waana aqoonyahan karti badan oo deganaa dalka Ingiriiska.
1-Khadijo Mohamed Diiriye ,Wasiirka Haweenka iyo qoyska, Madhibaan,waxay ku jirtay kudlada Mucaaradka laakiin markii xilkeedii loo ballanqaaday ayey qaab dadnimo xumo ka muuqata uga baxday kudlada iyadoo caaysay Xildhibaanadeey isku qadiyada ahaayeen.
2-Muxudiin Kaalmooy Wasiirka shaqada iyo shaqaalaha,Jareerweyne.
3-Burci Maxamed Xamza Wasiiru doowlaha Xafiiska Ra’isulwasaaraha,Shaanshi,
Warbaahinta Waagacusub waxeey ku faraxsan tahay iney noqotay Warbaahintii ugu horeeysay ee si rasmiya u faafisay Liiska golaha Wasiiradda cusub iyo qabiiladooda intaan la magacaabin ka hor.
Damujadiid liiska ay qorteen waxeey mudada dheer u heysteen iney bulshada Soomaaliyeed iyo Beesha Caalamka qaldaan si ay iskaga dhigaan kuwa ku mashquulsan la tashiyo hasse yeeshee ugu dambeyn waxaa golaha Wasiiradda loo magacaabay sideey u qorteen.
Ugu dambeyn waxaan leenahay Hambalyo Golaha Wasiiradda uu Madaxweyne Garguurte soo magacaabay maxaa yeelay lama dhihi karo Gole Ra’isulwasaare,dhinaca kalena waxaan tacsi u dirayaa Asxaabtii Damujadiid u sheegeen beenta ee Wasiiro sugayaasha ahaa.
Hees uu sameeyay Abwaan Cabdinasir Cabduqadir Cabdullahi oo aan laxanka saaray waxeey leedahay.
Diin nooma hayaan
Dalna nooma dhisayaan
Duni lama shaqeeyaane
Diida dulmi jadiidka
Diida damujadiidka diida
Doraad kuwaan la dirirniyo
Dad qalatadii ma doorshaan
Waa laba danaystoo
Midba door inoo yimide
Dibnaha waxay ka sheegaan
Dalqadooda ma gaarsana
Sida dooga geedaha
Diirta oga idlaysay
Dalkeenii u cunayane
Dubka waa adookale
Hadalkuna ka siidaran
Damaciyo u jeedkuna
waa duul cadawiyo
Daawo Sawiradaan:- Hala Yaabin Hadii uu Chine Ku Hormarey Dhaqaalaha!